Rooti Faransiis ah oo leh mooska iyo kareemka yicib | Cuntooyinka Jikada
Rooti Faransiis ah oo leh mooska iyo kareemka yicib
Maria vazquez | | Cunnooyinka miraha leh, Cunnooyinka fudud
Ka faa'iidayso kibista ka hadhay maalintii hore in la diyaariyo cuntooyin la dhadhamin doono maalinta xigta waa wax caadi ka ah guryaha adduunka oo dhan. Dalka Spain waxay aad ugu badan yihiin tusaale ahaan jajabka ama toasts Faransiis. Oo aad uga fudud tan dambe waa rooti Faransiis ah.
Rooti Faransiis ah leh mooska iyo kiriimka yicibta ee aan maanta kula wadaago, aad bay u fududahay in la diyaariyo. Waxay ku habboon yihiin dhammaadka wiigga, marka aan quraacanno, guud ahaan, oo leh xasillooni weyn. Dusha sare leh malab iyo kafee fiican, quraac ayaa la siiyaa!
Si aad u samayso rooti Faransiis ah waxaad u baahan tahay oo kaliya dhawr xabbadood oo rooti ah maalintii ka horraysay iyo xoogaa dareere ah si aad ugu qoyso garaac oo shiil. Haddii aad sidoo kale buuxiso sida aan ku soo jeedinayo moos si fiican u bislaaday iyo xoogaa kareem lows ah, setku waa wareegsan yahay!
Rooti Faransiis ah oo leh mooska iyo kareemka yicibku wuxuu sameeyaa quraac dhammaadka toddobaadka ah. Way sahlan yihiin, degdeg bay isu diyaariyaan, oo waa macaan yihiin.
2 xaleef oo rooti ah (4 haddii aad isticmaashid xaleef yar)
2 qaado oo kareem yicib ah
Baadiyo caano ah
Qaadada xNUMX malab
Saliid saytuun ama subag lagu shiilo
Dhirta ku daadi kareemka yicib mid ka mid ah wajiyadeeda.
Kadib waxaan jarjarnay mooska xaleef dhuuban oo waxaan si fiican u dul marineynaa kareemka yicib ee mid ka mid ah xaleefyadan.
Markii aan degnay dhammaanteen waxaan gelinnay xabbad kale oo rooti ah oo dabool ah. Waxaan jecelahay inaan dhinac walba dhinac ka saaro cadayga sababta oo ah habkaas ayaa iigu raaxo badan inaan wax ka qabto guud ahaan, laakiin muhiim ma aha inaan sidaas sameeyo.
In saxan qoto dheer waxaan garaacnay ukunta. Waxaan ku darnaa caanaha, kookaha iyo malabka oo si fiican isku qas ilaa ay ka midoobaan.
Waxaan ka gudubnay roodhidayada labajibbaaran ee isku -darkaas waa in si fiican loo qooyaa dhinac walba.
Marka xigta, waxaan ku dubnaa digsi saliid ama u dhigma subag digsi qaboojiye iyo waxaan shiilnaa labada dhinacba, iyada oo aan la gubin.
Waxaan ku raaxaysanay rooti Faransiis ah oo leh moos iyo kareem almond oo hadda la sameeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka miraha leh » Rooti Faransiis ah oo leh mooska iyo kareemka yicib
Dhex maraqa karootada
Qoosh hilibka doofaarka leh boqoshaada iyo broccoli ee maraqa soy